शिक्षकको दशैं कस्तो ? – तलब अनुसारको | नुवागी
शिक्षकको दशैं कस्तो ? – तलब अनुसारको
काठमाडौं । दुई विषयभन्दा बढी एसएलसी अनुत्तीर्णले रु. २० हजार ६ सय ७४, दुई विषयसम्म एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षकले रु. २२ हजार ६ पाइरहेका छन् ।
त्यस्तै प्रावि तृतीय तहका शिक्षकले २६ हजार ६ सय ४, प्रावि द्वितीयले २९ हजार ७ सय ६४, प्रावि प्रथमले ३८ हजार ६ सय ३६ पाइरहेका छन् ।
त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तहअन्तर्गत तृतीय तहले २९ हजार ७ सय ६४, द्वितीय तहकाले ३८ हजार ६ सय ३६ र प्रथम तहकाले ४० हजार ६ सय ६० पाइरहेका छन् ।
यता माध्यमिक तहका शिक्षकअन्तर्गत तृतीय तहकाले ३८ हजार ६ सय ३६, द्वितीय तहकाले ४३ हजार ३ सय ४८ र प्रथम तहका शिक्षकले ४८ हजार १ सय ७८ पाइरहेका छन् । यसबाहेक शिक्षकहरुले दशैं पेश्की पनि पाउँदै आएका छन् ।
शिक्षकहरुले सो दरमा पारिश्रमिक पाइरहे पनि ललितपुरको लुभुस्थित महालक्ष्मी मा.विमा गणित विषय शिक्षक मेदनाथ सापकोटा भने आफू शिक्षक भएकै कारण दशैं साधारण तरिकाले मनाउने गरेको बताउँछन् ।
शिक्षण पेशालाई ‘ह्वाइट कलर जव’ को संज्ञा दिँदै सापकोटा भन्छन्, ‘शिक्षण पेशा शुद्ध तलबमा मात्र आश्रित हुन्छ त्यसैले शिक्षकले अत्यन्त सामान्य तरिकाले दशैं मनाउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार शिक्षकको आर्थिक आम्दानीका कारण उनीहरुले चाहेर पनि दशैंलाई भड्किलो बनाउन सक्दैनन् । शिक्षकको तलब सामान्य भएकाले शिक्षकको दशै साधारण हुने उनको अनुभव छ ।
दशैं आउनु धेरै अगाडिदेखि नै सो चाड मनाउने (सोर्ह श्राद्धबाटै शुभकामना आदानप्रदान), दशैंमा एकैपटक धेरै खानुपर्छ भन्ने सोचको विपरितमा छन् उनी ।
‘दक्षिणाका लागि राष्ट्रिय बैंकमा लामो लाइन बसी पैसा साटेर धेरै दक्षिणा दिएर धुमधामसँग साथै धेरै बलि दिनुपर्छ भन्नेको मान्यता विरोधी हुँ म ।’ उनले दशैंमा भित्रिएको विकृतिको विरोध गर्दै भने, ‘दशैंलाई आफूभन्दा ठूलाबाट आर्शिवाद लिने र सानालाई आर्शिवाद दिने साधारण प्रक्रियाको रुपमा लिने गर्छु ।’ शिक्षकलाई समाजका अन्य मानिसले पछ्याउने भएकाले उनीहरुले दशैंलाई साधारण तरिकाले मनाएर, अरुको लागि नमुना बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बोडे मा.विका विज्ञान शिक्षक श्यामकृष्ण गसी श्रेष्ठ पनि यो दशैं सामान्य तरिकाले मनाउने सोचमा छन् । उनी भड्किलो रुपमा नभई, आम मानिसले मनाउने जसरी नै दशैं मनाउने बताउँछन् । बली प्रथालाई कम गर्ने चाहना राख्ने उनी भन्छन्, ‘हामी नेवार परिवारको चलन अनुसार पहिला ९ वटा बलि चढाउँथ्यौं, तर पोहोर साल एउटा र यो वर्ष बलि नै नदिने भएका छौं ।’
आफ्ना सन्तान शिक्षित र बुझ्ने भएकाले पनि यो वर्ष बलि नदिने निर्णय परिवारबाटै भएको उनले बताए । साथै उनले यस वर्षबाट भोज कम गर्न अष्टमी र नवमीमा मात्र भोज गर्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौंको पेप्सिकोलास्थित पाणिनी स्कुलमा जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा वातावरण विषयकी शिक्षिका भावना के.सी. आफ्नो घर विराटनगरस्थित आफन्तकोमा गई टीका लगाएर दशैं मनाउने योजना रहेको बताउँछिन् । दशैंमा आफन्तलाई भेट्न पाउने हुदाँ उनी दङ्ग छिन् । उनले आफ्नो दशैं साधारण व्यक्तिको जस्तै हुने जानकारी दिइन् ।
काभ्रेको पनौतिस्थित कुशादेवी स्कुलका अँग्रेजी तथा लेखा विषयका शिक्षक सागर तिवारी यो दशैंमा टीका लगाएपश्चात डोल्पा वा तिलिचो ताल जाने योजनामा छन् । सानो हुदाँ दशैंमा पिङ खेलेकोे, खोलामा पौडी खेलेको, कालीगण्डकीमा डुङ्गा चढेको सम्झँदै यस वर्ष ‘रिफरेन्समेन्ट’ का लागि डाडाँकाँडा घुमेर दशैं बिदाको उपयोग गर्ने उनले बताए ।
शिक्षकले साना खसी, कम पैसाको लुगा किनेर आफ्नो तलबलाई सही उपयोग गरी सामान्य तरिकाबाटै दशैं मनाउन उनले सुझाव दिए ।
शिक्षकको दशैं संस्मरण : टीकाको दिन झगडा गर्थें
युरो किड्समा बाजेबज्यैको भेला